Uzime ukhuthaza abesifazane ukungafeli ngaphakathi - Ilanga News
Home Izindaba Uzime ukhuthaza abesifazane ukungafeli ngaphakathi
Uzime ukhuthaza abesifazane ukungafeli ngaphakathi
UNkk Thando Mbokazi-Dhlomo uzomela iKwaZulu-Natal emncintiswaneni wozime abashadile, iMrs South Africa. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
IGQUGQUZELA abesifazane uku-ba bangahlali ebudlelwaneni obu-bahlukumezayo inkosikazi yenxusa laseNingizimu Afrika eMexico, ezomela iKwaZulu-Natal emnci-ntiswaneni wozime abashadile, iMrs South Africa eyaqalwa ngo-2004.
Lo mncintiswano uhlelwa ngu-Nkk Joani Johnson, naye owake wasithatha isicoco salo mncinti-swano.
UNkk Thando Mbokazi-Dhlomo (41), wasePinetown – kodwa ozinze eMexico njengoba eshade noMnu Thokozani Dhlomo – uthi ngoku-ngenela kwakhe lo mncintiswano ubehlose ukugqugquzela abesifa-zane ukuba bazazi ukuthi bango-bani, bangakuvumeli ukuhlukumezeka noma ngokwaluphi uhlobo.
Uthi abesifazane yize bekhuli-swe ngokuthi kumele babezekele, bayibambe ishisa emendweni, kodwa akufanele babekezelele ukushaywa, ukwehliswa isithunzi baze bazikhohlwe ukuthi bangobani.
“Uma ushaywa, khuluma unga-feli ngaphakathi ngoba lezo zibazi ezingabonakali zenza abanye ba-gcine sebelaliswa ezibhedlela, abanye baze bazibulale.
“Ngifisa ukugqugquzela abesifa-zane ukuba bazithande, badle uku-dla okunempilo futhi bazivocovoce. Ukushada akusho ukuthi kufa-nele ulenge ungabe usazithanda. Uma kufanele ufunde, funda uqhubeke nempilo,” kusho yena.
Lo mncintiswano uqale ngenza-labantu ewu-100, kwahlungwa kwasala ewu-50 kanti sekusele ewu-25.
Umcimbi omkhulu kulindeleke ukuba ubese-Emperos’s Palace, eGoli ngoLwezi (November) osu-kwini olusazomenyezelwa.
UNkk Mbokazi-Dhlomo nguye yedwa osesele omele iKwaZulu-Natal. Ozowina uzobe ethatha isi-coco sikaNkk Thenji Mdluli oku-nguye owadla umhlanganiso ko-wangonyaka owedlule.
Previous articleUsizi kokhulisa abazukulu ngempesheni
Next article“Ushaywe ngesagila” bechitha ikhansela ebeliphakanyiswa